किन विदेशी मुद्रा मा गुमाए?
आज, विदेशी मुद्रा मा व्यापार पहिलेभन्दा उपलब्ध छ। खाता खोल्न र लगभग गर्न सक्छन् कुनै व्यापार सुरु गर्नुहोस्। न्यूनतम जम्मा $ 1 देखि सुरु हुन्छ। त्यसैले, व्यापार झन् लोकप्रिय सोख बन्दैछ।
तर तथ्याङ्क छैन खुसी छ: व्यापारीहरु को 95% आफ्नो पैसा, आफ्नो कमाई को मात्र 5% गुमाउन। व्यापार को seeming सादगी तापनि वास्तवमा, यो व्यापक प्रशिक्षण र अनुभव आवश्यक गम्भीर व्यापार हो। भुक्तानी मा प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पारित गरेपछि तुरुन्तै बन्न एक पेशेवर व्यापारी काम गर्ने छैन। वर्ष को लागि यस उद्देश्य गर्न, बिस्तारै आफ्नो व्यापार सुधार।
तर सबै भन्दा शुरुआती यो विचार छैन। र राम्रो कारणले। विशेष गरी किनभने शुरुआती को 90% नै गल्ती! कसरी यी त्रुटिहरू छन्, र रहन पनि फोरम, अझै पनि केही परिवर्तन, यसलाई बारेमा कुरा इन्टरनेटमा उपयोगी जानकारी को धेरै, मा। मुख्य व्यक्तिहरूलाई विचार गर्नुहोस्।
देखावटी जोखिम। सबै व्यापारीहरु धेरै विनाशकारी परिणाम गर्न प्रमुख, प्रारम्भिक चरण, धेरै खुला ठूलो सम्झौता मा, कमाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण जम्मा लागि असामान्य एउटा असफल कारोबार हराएको छैन। व्यवसायी यो अनुमति छैन। "पत्ता लगाउनुहोस् स्थिति, आकार कस्तो हुनुपर्छ" उहाँले हरेक कारोबार मा जोखिम गणना लागि आफ्नो विधि साझेदारी जसमा: एक सफल व्यापारी बन्न गर्नुपर्छ।
एकल व्यापार मा जम्मा 5% भन्दा जोखिम छैन: अनुभवी सट्टेबाजों एउटा कुरा मा सहमत छु। त्यसैले ढिलो गर्न वा पछि एक गम्भीर drawdown समयमा सबै पैसा को कमी को नेतृत्व गर्न विफलता। सबै सम्झना गर्न।
हामी प्रवृत्ति प्रणाली को श्रेणी विचार भने, नियमहरू छन्: राजधानी को2भन्दा बढी% जोखिम छैन। यसले drawdown धेरै गहिरो अन्य व्यापार शैलीहरू तुलना गरिएको छ गुमाउने ट्रेडों को एक ठूलो संख्या द्वारा बताए छ।
यो कि कारोबार मा मात्रा र स्थिति जोखिम को अवधारणाहरु भ्रममा ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। स्थितिहरु को मात्रा - यो विदेशी मुद्रा मा किनेको वा बेच्न धेरै को संख्या। र लेनदेन मा जोखिम - एक व्यापारी भने उहाँको विरुद्धमा मूल्य चाल गुमाउनु हुनेछ पैसा को मात्रा हो।
दोस्रो अवरोधलाई लाभदायक व्यापार गर्न बाटो मा विदेशी मुद्रा को मनोविज्ञान छ। पैसा काम व्यक्ति मा दबाव को धेरै, विशेष गरी तयार छ। यो अवस्थामा, भोक, को हानि निद्रामा र धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो निर्णय बनाउन क्षमता worsening! nachinayaschim प्रयास गर्नुपर्छ जो लाभदायक सट्टेबाजों को गुणहरू को एक, - एक ठूलो जानकारी तनावपूर्ण अवस्थामा मात्रा काम।
त्यहाँ निरर्थक अवस्थामा एक व्यापारी रणनीति, अनुभव सिद्ध छ जो छन्, तर केही बिन्दुमा, यसको नीति पालना र क्षति कारण छ कि हतार सम्झौताहरू गर्न इन्कार। त्यो तनाव को प्रभाव हुन सक्छ के।
कुनै पनि प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भने, त्यसपछि मनोविज्ञान धेरै गाह्रो छ। आफ्नो टाउको उल्लेखनीय परिणाम हासिल गर्ने र व्यापारीहरु एउटा सानो प्रतिशत प्रबन्धन मा बुझ्छु।
एक स्थिर रहन्छ: जसले तपाईंलाई हुनेछ, तपाईं निर्भर! मुख्य कुरा व्यापार सुधार गर्न र प्रमुख गल्ती छैन परिणाम प्रतिबद्ध छ। सबै सट्टेबाजों हेर्न नै ग्राफिक्स लगभग बराबर छन्, तर कसैले कमाता, र कसैले हराउछ।
विदेशी मुद्रा मुद्रा व्यवस्थापन: महत्त्व महत्त्व
RTS के हो?
कसरी "विदेशी मुद्रा" मा एक डेमो खाता खोल्न खोल्न?
Agafya Karpovna Lykova: को साइबेरियन recluse को नवीनतम समाचार
दिग्गज जापानी crossovers सिर्जना को इतिहास र आधुनिकीकरण "सुजुकी ग्रान्ड Vitara"
हल्ला - एक ... औद्योगिक हल्ला र मानव यसको प्रभाव
कक्षा शिक्षक को एक राम्रो तैयार पोर्टफोलियो - सफलता एक कदम